Kidnapping Maevatanana Ao Mahitsy no fanafenana ny zaza nalaina an-keriny
Araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena ao Ankazobe, ao Mahitsy, distrikan’Ambohidratrimo no nanafenan’ireo mpaka takalon’aina ilay zaza very efa enim-bolana lasa.
Nisy tranga mampalahelo ana hala-jaza tany Marotaolana, kaominina Tsiafabositra, Maevatanana ny 2 febroary lasa teo. Nametraka ny fitarainana tamin’ireo manampahefana any an-toerana ny ray aman-drenin’ity zaza 3 taona very ity. Olon-tsotra no nampita vaovao tamin’ny zandarin’Ankazobe, ny herinandro teo mikasika ny fisitrihan’ilay lehilahy iray voarohirohy tamin’ity raharaha ity tao Antokonana, kaominina Tsaramasoandro, distrikan’Ankazobe. Tra-tehak’ireo mpitandro filaminana tao tokoa ilay mpanao kidnapping ary nandritra ny fanadihadiana azy no nahalalana fa nafeniny ao Mahitsy ilay zaza. Rehefa nanatanteraka fidinana ifotony tao amin’io renivohitry ny atody io ny zandarin’Ankazobe niaraka tamin’io mpaka takalon’aina io dia tra-tehaka tao ireo mpivady izay nitazona ilay zaza.
Tafody ilay zaza telo taona
Nentin’ny mpitandro filaminana nihazo an’i Maevatanana avy hatrany ireto olon-dratsy telo ireto, dia ilay mpaka an-keriny sy ireo mpiray tsikombakomba nitahiry ilay zaza. Marihina moa fa ny kaompanian’ny zandary any Maevatanana sy ny fitsarana ao Maevatanana no efa nadray an-tanana ny fandraisana fitarainan’ny fianakavian’ny lasibatra. Efa naterina any amin’ny ray aman-dreniny ilay zazakely ary salama tsara raha ny fampitam-baovaon’ny zandary. Mitohy ny famotoran’ny zandary sy ny fitsarana ary hampintaina tsy ho ela eto ny anton’izao fanagiazana zaza izao.